तपाई बुलेट प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ ? बिचार गर्नुहोस् । – युवा अभियान
तपाई बुलेट प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ ? बिचार गर्नुहोस् ।
obhadnari — २०७४ पुष २५, मंगलवार १२:२६0comment
२५ पुष, सिमरा । सुप्रिया ढकाल ।
रोयल बुलेट बाईक आजभोलीका युवाहरुको बिषेश रोजाईमा पर्ने गरेको छ । होचो, भारी, डल्ले हेर्दा राजामहाराजाको वाहन जस्तो देखीने माटरसाईकललाई नेपाली बजारमा ४ लाख रुपैया भन्दा बढि पर्छ । निकै ठुलो आवाज निकाल्ने यस मोटरसाईकल सडकमा गुडाउदा सबैको ध्यानाकर्षण हुने भएकाले पनि होला बुलेट बाईक भन्ने बित्तिकै युवाहरुको उत्साह नै छुट्टै हुन्छ । तर यसले संबेदनशिल क्षेत्रमा कति प्रभाव पार्छ भन्नेबारे युवाहरु ख्याल नै गर्दैनन् । बुलेटको अत्याधिक ध्वनि प्रदुषणले बिषेशगरी बालबालीकामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने शिक्षक मदन रिजालले बताउनुभयो ।
बुलेट मोटररसाईकलबाट निस्कने करकस आवाजले सहरी तथा ग्रामिण भेगमा एकसुर काम गरीरहेका शर्वसाधारणलाई प्रभावित तुल्याएको छ । यस किसिमको मोटरसाईकल निर्माण कम्पनीले सामान्य आवाज निकाल्ने किसिमको डिजाईन गरेपनि प्रयोगकर्ताले कम्पनिको साईलेन्सर बदलेर झनै ठुलो करकस ध्वनी निकाल्ने यन्त्र जडान गर्ने गरेका छन् । यसरी आफैले सवारीको स्वरुप तथा आवाज परिवर्तन गर्ने सवारी प्रयोगकर्तालाई कार्वाहिको दायरामा ल्याईने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख रिपेन्द्रकुमार सिंहको भनाई छ ।
अधिकांश युवाहरु अन्य साधारण मोटरसाईकल भन्दा बुलेट तर्फ नै आकर्षित छन् । तर हाम्रो समाजमा यसको संख्या बढ्दै जादा ध्वनिप्रदुषण पनि बढेको मानवअधिकारकर्मी बिदुर खड्काले खुगेसो गर्नुभयो । पुराना सवारीले गरेको ध्वनि प्रदुषणा नियन्त्रणमा लिन सरकारले २० बर्षपुराना सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएपनि यस्ता आधुनिक सवारीको प्रदुषण रोक्न खासै पहल गरेको छैन ।
तर बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश केसरी भन्नुहुन्छ, “बिषेश सर्च अभियान थाल्छौ । आजसम्म कुनै पनि गुनासा या उजुरी आएको छैन । तर अब यसबारे म ट्राफिक ईन्चार्जलाई खबर गर्नेर्छु ।” उच्च ध्वनीका साथ तिब्र गतिमा सवारी चलाउने जो कोहिलाई पनि कार्वाहिको दायरामा ल्याईने केसरीले बताउनुभयो ।
चाडै त्यस्ता ध्वनि प्रदुषण फैलाउने सवारी नियन्त्रणका लागी समेत अभियान सञ्चालन गर्ने बाराका प्रहरी प्रबक्ता प्रहरी नायव उपरिक्षक भुवनेश्वर साहले बताउनुभयो ।
यसले अति संबेदनशिल क्षेत्रमा बढि मार परिरहेको छ । त्यति मात्र होईन शान्त वातारणमा रहन पाउने आधारभुत अधिकार हनन हुदा पनि सम्बन्धित निकाय तथा प्रशासनले बेवास्ता गरीरहेको सिमराका स्थानिय अर्जुन श्रेष्ठले दुखेसो गर्नुभयो ।
२०७७ चैत्र ६, शुक्रबार १५:०७
२०७७ फाल्गुन २०, बिहीबार ०५:५४
२०७७ फाल्गुन ९, आईतवार १४:३७